Nagu saabsan - Wuxi Yaqin Commercial And Trading Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2008, Wuxi Yaqin Grinding Tools co., Ltd. waa shirkad ganacsi oo xirfad leh taas oo ay ka dhalatay warshad ku takhasustay soo saarista qalabka ciidda iyo qalabka shiidi.
Waxa Aynu Sameyno？
Ganacsigayaga ugu weyn: soo saarista xirfadeed ee qoditaanka qoditaanka ciddiyaha, koofiyadaha ciidda, guutooyinka ciidda, mashiinnada ciddiyaha iyo aaladaha kale ee ciddiyaha. Alaabtayada ayaa caan ku ah iibinta USA, Russia, France, UK, Ukraine, Germany, Italy, iwm.
isku -dhafan warshadaha iyo ganacsiyada, dammaanad ka qaad qiimahaaga
Farsamo yaqaanno xirfadlayaal iyo iibiyeyaal
Aka dib Sale
Waxaa lagu qalabeeyay koox iib ah oo xirfadle ah kadib
Ka go'an inaad noqoto lamaanahaaga ganacsi ee aad doorbidayso
13 sano oo waayo -aragnimo xirfadeed ah oo ku saabsan qalabka shiidi
Maraakiib degdeg ah oo deggan
Shirkad sxoog leh
Wuxi Yaqin Tool shiidi Co., Ltd. ayaa ku takhasusay soo saarida qalabka ciidda iyo qalab shiidi 13 sano. Warshaddeenu waxay ku taal xinghua, aagga dhirtu waa 2000 mitir oo laba jibbaaran, waxaan leenahay farsamayaqaannada ugu horumarsan iyo qalabka wax soo saarka.
Sidaa darteed, waxay urursatay waayo-aragnimada Warshadaha, Yaqin wuxuu urursaday tiro badan oo iibsadayaal daacad u ah gudaha oo leh tayo aad u sarreysa iyo qiimo hoose.
Waa bixiyaha inta badan shirkadaha ganacsiga shisheeye ee shiinaha. Waxaan higsaneynaa inaan macaamiisheena siino badeecado iyo adeegyo tayo sare leh.
Labadii sano ee la soo dhaafay, imaatinka bandhigga ayaa sidoo kale u suurtogeliyay Yaqin inuu goosto dufcadda Jacaylka Iibsadaha shisheeye, ammaanta iibsadayaasha iyo dib -u -iibsiga ayaa sidoo kale Yaqiin ku sii adkeeyay inuu aado dibadda.
Waxaan leenahay maamul tayo sare leh, farsameeye farsamo oo xirfad leh iyo koox shaqaale ah oo wax soo saar leh. Waxaan bixinnaa OEM iyo ODM, waxaan bixinnaa adeeg karti u leh naqshadaynta, soo -saarka iyo dhoofinta.
Badeecadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa Mareykanka, Ruushka, Ukraine, Britain, Brazil, Israel, Mexico, Poland, Italy, Germany, Vietnam, iwm.
Sida astaanta Yaqin, Yaaqin hadafkeedu waa inuu dhulka qabsado oo badeecadiisu ku faafto gees kasta oo adduunka ah!
Qiimayaasha aasaasiga ah ee Yaqiin waa "DAACAD IYO HAL -ABUUR", kuwaas oo aasaas u ahaa Mabaadi'da Ganacsiga Guud ee Yaqin muddo 13 sano ah waxayna sii ahaanayaan kuwo muhiim u ah sidii hore.
QAAR KA MID AH MACMIILKEENA
Waxaan ku guuleysaneynaa kalsoonida iyo ammaanta macaamiisheena, waxaanna dhidibnay xiriir wanaagsan oo iskaashi oo muddo dheer ah.
Tan iyo 2008, Shirkaddayadu waxay ka qaybgashay in ka badan 50 bandhigyo wada jir ah oo gudaha ama dibadda ah, sida InterCharm Ukraine, Cosmoprof North America, Cosmoprof bologna, Beauty Duesseldorf, Intercham Russia, Guangzhou Beauty Expo, iwm.